WARBIXIN: Aubameyang,Dzeko,Pastore,Ibrahomivic & 8 Saxiix Oo Dhici Kara Maalinta Ugu Dambaysa Suuqa Kala iibsiga January – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Aubameyang,Dzeko,Pastore,Ibrahomivic & 8 Saxiix Oo Dhici Kara Maalinta Ugu Dambaysa Suuqa Kala iibsiga January
WARBIXIN: Aubameyang,Dzeko,Pastore,Ibrahomivic & 8 Saxiix Oo Dhici Kara Maalinta Ugu Dambaysa Suuqa Kala iibsiga January
January 30, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Waxa kaliya xiritaanka suuqa kala iibsiga January ka hadhay maalin kaliya iyada oo si Rasmi ah albaabka loogu xiri doono maalinta Arbacada kuna beegan maalinta bari ah.
Kooxo badan ayaa tartan la galaya wakhtiga sidii ay kooxdooda ugu soo dari lahaayeen xiddigaha ay u bahan yihiin ka hor inta uuna suuqu xirmin.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 8 saxiix oo la dhamanayn doono ka hor inta uuna suuqu xirmin maalinta bari ah:
Ka Tagitaanka Pierre-Emerick Aubameyang ee Borussia Dortmund ayaa ah mida ugu hadal haynta badan suuqan, waxana ay haatan u muuqataa in ay Arsenal dhamaystiri doonto saxiixa xiddigan iyada oo ka bixin doonta lacag dhan 65 milyan oo euro weeraryahan.
Weeraryahanaka kooxda chelsea ee Michy Batshuayi ayaa noqon kara badalka Aubameyang ee kooxda reer Germany, mustaqbalka xiddiga reer Belguim ayaan cagaha ku fadhiyin maadama uu ka dambeeyo weeraryahanka Alvaro morata.
Kooxda chelsea ayaa shaki la,aan u dhaqaaqi doonta badalka Michy Batshuayi marka uu ka tago kooxda, kooxda chelsea ayaa ku rajo weyn in ay keento weeraryahanka kooxda Bosnia ee Edin Dzeko hadii uu Michy Batshuayi ka tago kooxda, laakiin warar haatan soo baxaya ayaa sheegaya in heshiisku uu gabi ahaan bur-buray laakiin suuqa kala iibsiga ayaa wax walba laga filan karaa.
Xiddigo badan oo kooxda PSG ay ayaa doonaya in ay isaga tagaan kooxda sabab la xiriirta ciyaari la,aan kulmada ah, tusaale ahaan Javier Pastore ayaa haatan wadahadalo kula jira kooxda Inter Milan isaga oo si aad ah u doonaya in uu isaga tago ka hor inta uuna suuqu xirmin.
Waa xiddig kale oo si aad ah u doonaya in uu isaga tago kooxda PSG lana xaalad ah Pastore, Lucas Moura ayaa haatan wadahadalo horumar leh kula jira kooxda Tottenham waxana la sheegayaa in ay labada kooxood ka heshiiyeen qiimaha xiddiga reer Brazil.
Jose Mourinho ayaa albaabka u furay hadii uu Zlatan Ibrahomivic doonayo in uu ka tago kooxda Man United, Weeraryahanka reer Sweden ayaan wax kulan ah u ciyaarin Tan ilaa December, imaantinka Alexis Sanchez ayaan xaalada ku sii adkayn doona, Zlatan ayaa laga yaabaa in uu ku sii jeedo horyaalka America ee MLS.
Kadibi bixitaankii Rafinha iyo Deulofeo, Barcelona ayaa haatan kaliya doonaysa in ay kooxdeeda ka dirto suuqa January waana xiddiga daafaca ka ciyaara ee Aleix Vidal daafaca ayaa lala xiriirinayaa kooxo badan oo ay ka mid yihiin Sevilla iyo Roma.
Nico Gaitan ayaa wakhti adag ku qaadanaya Atletico Madrid waxana ay kooxda reer Spain doonaysa in ay iska fasaxdo nooc kasta oo ay awoodo iyada oo lala xiriirinayo kooaha Zenit iyo Swansea City.
Filed in: France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino